အီရန် နျူကလီးယား စာချုပ်ကတိကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နိုင်ငံများ ထပ်မံ အတည်ပြု - Yangon Media Group
ဗီယင်နာ၊ ဇူလိုင် ၂၉
အီရန်နျူကလီးယားစာချုပ် အရေးယူမှုဆိုင်ရာကျယ်ပြန့်သော ပူးတွဲစီမံကိန်း (JCPOA) ကို ကျန်ရှိနေသည့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ သည့်နိုင်ငံများက ၎င်းင်းတို့၏ကတိကို ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြပြီး အ မေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တစ်ဖက် သတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကို ဗီယင် နာမြို့အစည်းအဝေးက ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ရှုတ်ချလိုက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟု တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်သည်ကို ဆင်ဟွာသတင်းက ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဖူကောင်က ပြော ကြားရာတွင် မိမိအနေဖြင့် သတင်း နှစ်ခုကို ပြောကြားသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အစည်းအဝေးပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြော ကြားခဲ့သည်။ ပထမချက်အနေဖြင့် နျူကလီးယားစာချုပ်ဲJCPOA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည့်နိုင်ငံများက စာချုပ်ကို အကာအကွယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး JCPOA ကို အပြုသဘောဆောင်သည့်အနေ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သွား ကြမည်ဟုဆိုသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ လက်မှတ် ရေးထိုးသည့်အဖွဲ့၌ပါသော နိုင်ငံအားလုံးက အမေရိကန်၏ အပြုအမူများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ တစ်ဖက်သတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို ပိတ်ပင်ကြောင်း၊အထူးသဖြင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်သောနိုင်ငံများက တရုတ်၏ JCPOA အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ထောက်ခံကြောင်း၊ တရုတ်က အီရန်၏ ရေနံများကို ပုံမှန်အတိုင်းဝယ်ယူကာ ကုန်သွယ်ရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖူက ပြောကြားလိုက်သည်။
အီရန်နျူကလီးယားကိုယ်စားလှယ်အဘတ်စ်အာရက်ချီက ဤဆွေးနွေးပွဲမှာ တိုးတက်မှုရှိ ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ အရာအားလုံးဖြေရှင်းလိုက်ပြီဟု မပြောသော်လည်း ဆွေးနွေးပွဲက ကောင်းပါသည်ဟု ၎င်းင်းကဆိုသည်။ ဤအစည်းအဝေးအား ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်နှင့် အီရန်တို့၏ တောင်းဆိုမှုဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး JCPOA ၏ ရည်မှန်းချက်များကို စိစစ်ခဲ့ကြောင်း သံတမန်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်က အမေရိကန်ပိတ်ဆို့ မှုကိုရှောင်ရှား၍ အီရန်နှင့်အီးယူ ကုန်သွယ်မှုကို တတိယနိုင်ငံတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ရန် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အီးယူက ဤအစည်းအဝေးမှာ နျူကလီးယားသဘောတူညီ ချက်နှင့်ပိတ်ဆို့မှုဖယ်ရှားရန်ကိစ္စမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်သည်။ ဤကိစ္စကို ကျွမ်းကျင်သူများအဆင့်က ဆက်လက်ဆွေး နွေးသွားကြမည်ဟု အီးယူအဖွဲ့က ပြောခဲ့သည်။ အီရန်နျူကလီးယားစာချုပ် JCPOA ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ အ မေရိကန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ ဗြိတိန်နှင့် ဂျာမနီတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
''အနုပညာ Project Plan တွေရှိနေလို့ တခြားဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး'' ဒါရိုက်တာ ဏကြီး
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက် သေနတ်ပစ်မှု လေးဦးသေဆုံး၊ ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ပါကစ္စတန်က အစွန်းရောက်အဖွဲ့များ၏ လူမှုမီဒီယာများကို နှိမ်နင်းသွားမည်
ချင်းပြည်နယ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းငါးခုကို တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာကျေးရွာများတွင် ကြေးစည်သံ၊ မောင်းသံများဝေစည်နေသလို ငြ??
”ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ မရိုက်နိုင်ဘူး၊ ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်လုံး တော်လှန်မ??